Dowladda Federaalka Oo Xaqiijisay in Mas'uul katirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda uu taageeray Maamulka Yahuudda.
Monday April 01, 2019 - 09:52:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Federaalka ayaa markii ugu horraysay xaqiijisay in mid kamida mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadad uu taageero umuujiyay maamulka Yahuudda ee xoogga ku heysta dhulalka Filasdiin.
Qoraal kasoo baxay madaxtooyada Farmaajo ayaa lagu sheegay in shaqada laga Eryay Agaasimihii wasaaradda arrimaha dibadda Ninka lagu magacaabo C/llaahi Axmed Dool kaas oo ku baaqay in lataageero maamulka Yahuudda.
C/llaahi Axmed Dool ayaa farriimo uu baahiyay bartiisa Twitterka wuxuu ku muujiyay sida uu u taageersanyahay maamulka Yahuudda iyo go'aamadii Donald Trump ee Yahuudda u sharciyaynayay dhulka Buuraleyda Al Jowlaan ee kala qeybiya Filasdiin iyo Suuriya.
Shir Bishii lasoo dhaafay ka dhacay wadanka Swezerland ayey wakiillada dowladda Federaalka ee Q.Midoobe taageera umuujiyeen maamulka Yahuudda kadib markii ay ka aamuseen in ay cambaareeyaan go'aamaddii Trump uu Yahuudda kusiiyay dhulal muslimiinta Filasdiin ay leeyihiin.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo caan ku aheyd dabadhilifnimada dowladaha shisheeye ee ciidamadoodu kusoo duuleen dalka ayaa hadda ku darsatay lasafashada Yahuudda.
Donald Trump Oo Cunaqabateymo kusoo rogay Sedaxda Wasaaradood ee ugu muhiimsan dowladda Turkiga.
Guddoomiye ku xigeenka dhanka Amniga gobolka Sh/dhexe oo Jowhar lagu dilay iyo Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda dilkiisa
Dowladda Kenya oo xaqiijisay in 11 Askari ay uga dhinteen Qaraxii Al Shabaab Ee duleedka Gaarisa.
Mas'uul katirsanaa Maamulka 'Hirshabelle' oo lagu dilay deegaanka Fiidoow.
Daawo Video: Madaxweynaha Mareykanka Oo ihaaneeyay dowladda Sacuudiga.
10 Askari Kenyaan ah oo ku dhintay Qarax ka dhacay deegaanka katirsan Gaarisa.